မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိနေတယ် | FOX Sports Myanmar
မြန်မာအသင်းသတင်း | အောကျတိုဘာ 11, 2019
ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး ဆဲဆိုရန်အလို့ငှာ ပြင်ဆင်နေကြကုန်သော တာဇံမျိုးနွယ်ဝင်အပေါင်းတို့ စိတ်ရှည် သည်းခံပြီး စာကို အဆုံးအထိဖတ်ပေးဖို့အရင်ဆုံးတောင်းဆိုပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျ။ အဖြစ်က မနှစ်ကနဲ့မတူဘူး စာကို အဆုံး အထိမဖတ် စာရေးသူပြောချင်တာဘာလဲသေချာမသိဘဲ ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး ဆဲနေကြတာ ခဏခဏခံနေရတာဆိုတော့ အရင်ဆုံး ဒါကိုရှင်းမှဖြစ်မယ်။ (ကလေးဘ၀ကဖတ်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းတွေထဲမှာ “ရွှေဘခံနေရတာခဏပါ နောက်တစ်ခန်းပြန်နိုင်မှာပါ” ဆိုပြီး ကြေညာတဲ့သဘောပါပဲလေ)။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေးမယ့်အကြောင်းအရာက ဒီနေ့အွန်လိုင်းမှာ အမြင်ရဆုံးစံချိန်တ င် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းအကြောင်းရေးမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။
အရင်တုန်းက မြန်မာအသင်းတွေကို စိတ်ပျက်တယ် လို့မကြာခဏပြောဖူးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနေ့က ကာဂျစ်နဲ့ ကစားတဲ့ပွဲကို ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ “ငါအရင်က စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ အခုနဲ့စာရင်ဘာဟုတ်သေးလို့ လဲ”ဆိုပြီးတွေးရတဲ့အထိ စိတ်ပျက်စရာကောင်းခဲ့တာပါ။ ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကို ရှုံးတိုင်း အပြစ်တင်နေ ဆဲဆိုနေတဲ့လူတွေထဲမှာ ကျွန်တော်မပါသလို ဘောလုံးအသင်းရဲ့ ရလဒ်အပေါ်မူတည်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အားထုတ်မှုကို ဘယ်တော့မှအကဲမဖြတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဘောလုံးအသင်းတွေ ရှုံးခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ဘာမှအကျိုးအကြောင်းမရှိဘဲ ဟိုလူညံ့တယ် ဒီလူညံ့တယ်ဆိုတာမျိုးအပြစ်တင်တဲ့ပုံစံမဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး အပြူသဘောဆောင်နိုင်တဲ့အထိ ဖြည့်တွေးပေးခဲ့ တာတွေချည်းပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေကိုပြန်အပြစ်တင်ပြီး ဝေဖန်အပြစ်တင်တယ်ဆိုတာ ပြန်ပြင်လို့ မရတဲ့အနေအထား တစ်ခုမှာ တရားခံရှာ အပြစ်ပုံချသလို ဖြစ်နေပြီး အကျိုးထက် အပြစ် ပိုများတဲ့သဘောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ မဝေဖန်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဖြည့်တွေးပြီး နားလည်ပေးလို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီပုံစံအတိုင်းစီးမြောနေပြီး တဖြည်းဖြည်းနိမ့်သထက်နိမ့်ကျလာတဲ့အနေအထားက အဆိုးဆုံးအနေအထားဖြစ်လာပြီမို့လို့ပါ။ အခု လိုခြေစစ်ပွဲမှာ ဂိုးပြတ်ရှုံးတာအထူးအဆန်းလုပ်ပြီး ဘာလို့ခုမှပြောနေရသလဲ။ အခုမှရှုံးဖူးတာမှမဟုတ်တာ။ ဒီလိုပြန်မေးလာ ရင်လည်း ဖြေစရာအသင့်ရှိပါတယ်။ အားနည်းတဲ့အချက်တွေ မှားယွင်းတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိနေတာကို ထောက်ပြခဲ့ အကြံပြုခဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမယ့် တစ်ခုမှ ပြင်ဆင်တာမျိုးမရှိဘဲ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်စိုင်းပြီး နစ်သထက်နစ် အောင်လုပ်နေတာကြောင့်ပါ။ အခုလိုရေးလို့လည်း ပြင်ဆင်မယ် ကြိုးစားမယ် ဆိုတဲ့အထိ တွန်းပို့နိုင်မယ်လို့မယူဆပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီအတွက် တွန်းအားလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်စေမယ်လို့ယုံလို့ပါ။ကဲ. . . ကာဂျစ်စ္စတန်ကို (၇)ဂိုးဆိုတဲ့ကိစ္စ ပဲပြောလိုက်ရအောင်။
ဒီဖြစ်စဉ်က ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ ဘောလုံးအဆင့်အတန်းကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမီးမောင်းထိုးပြနေတာ ပါပဲ။ ကာဂျစ်စ္စတန်ဆိုတာ ကိုယ်တွေထက် ခြေစွမ်း၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊ ခွန်အား၊ အရပ်အမောင်း သာလွန်တဲ့အသင်းဆိုတာလက်ခံပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ မူကြိုကျောင်းသားတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဘောလုံး ကန်သလို ဖြစ်ရလောက် အောင်တော့ကွာဟမှုမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်အခုလိုကွာဟရတာလဲ ခြေစွမ်း၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ နည်းစနစ်၊ နည်းဗျူဟာ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု၊ ရည်မှန်းချက်ထားမှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း ဘယ်တစ်ခုမှာမှ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုမတွေ့ခဲ့ရလို့ပါ။
ပထမဆုံးစပြောရမှာက နည်းပြနဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့။နောက်ပြီး အရေးကြီးတာက “နည်းစနစ်ကော်မတီ” အဖွဲ့။ ဒီပွဲမှာ ကစားဖို့ လူရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ ပွဲထွက်လူစာရင်းကို ဘယ်သူကတာဝန်ယူခဲ့ပါသလဲ။ နည်းပြလား ဒါမှမဟုတ် နည်းစနစ်ကော်မတီလား။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဘယ်လိုစံမျိုးနဲ့ ရွေးခဲ့ပါသလဲ။ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူရွေးချယ်မှု မှာကတည်းက ကွင်းလယ်ပိုင်းအားနည်းချက်ကိုထောက်ပြကြတယ်။ MNL မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ကစားသမားတချို့ထား ခဲ့ပြီး ခေါင်းမာမာနဲ့ ရှေ့ဆက်တယ်။ ပွဲထွက်လူစာရင်းမှာတော့ ကွင်းလယ်ကို ကလပ်မှာဗဟိုခံစစ်ကစားနေရတဲ့သူတွေက ကစား၊ တောင်ပံခံစစ်မှာလည်း ကစားနေကြမဟုတ်တဲ့သူတွေကစားခိုင်း ရှင်းရှင်းပြောရင် ရပ်ကွက်ပွဲတွေကစားလို့ လူ(၁၁)ပဲရှိ တယ်။ အဲဒီလူ (၁၁)ယောက်ကို အဆင်ပြေအောင်နေရာချလိုက် ဆိုလို့လုပ်ထားရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။ အရန်ထဲမှာရော၊ မရွေးဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ထဲမှာရော ရှိနေတဲ့ကွင်းလယ်တွေ တောင်ပံခံစစ်တွေက ပွဲထွက်တွေလောက် စွမ်းဆောင်ရည်မကောင်းသလိုလို။ ဒါဆိုလည်း ကိုယ့်နေရာမှာကိုယ်ပိုင်နိုင်အောင်မကစားနိုင်ဘဲ တခြားကစားသမားတွေအစားဝင်ဖြည့်ရမယ့်အတူ ရန်အောင်ကျော်၊ ဒေးဗစ်ထန်၊ ကျော်ဇင်လွင် တို့လိုကစားသမားတွေ နဂိုကတည်းက မရွေးဘဲ ချန်ခဲ့ရင် တခြားကစားသမားတွေ ရွေးဖို့ နေရာထွက်မလာနိုင်ဘူးလား။ အခုတော့ ကစားသမားတွေက သူတို့ကစားနေကျနေရာမှာ မဟုတ်ဘဲ ကစားရတော့ သူများကိုဖျက်ဖို့ခဏထား ကိုယ်တောင်ဘယ်နေရာနေရမှန်းမသိဘဲ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေတာ တွေ အများကြီးပဲ။
နောက် နည်းစနစ်။ ဒါကိုလည်း ဘယ်သူစီမံခန့်ခွဲပြီး တာဝန်ယူသလဲသိချင်ပါတယ်။ ဒါနည်းပြတစ်ယောက်တည်းရဲ့ ဆုံး ဖြတ်ချက်လား။ ဒါမှမဟုတ် တတ်ယောင်ကားစွက်ဖက်မှုတွေရှိနေလား ဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဆိုးရွား လွန်းတဲ့နည်းစနစ်အခင်းအကျင်းကြောင့်ပါ။ အများကြီးမပြောလိုပါဘူး။ တစ်ခုပဲပြောပါမယ်။ှGoal kick က side back တွေကို ပေးတဲ့အချိန်မှာ တစ်ဖက်က Pressing လုပ်ကစားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကွင်းလယ်က Side Back ကိုဆင်းမကူ တော့ အတွင်းထဲပြန်ပေး ဟိုက Pressing လာတော့ ကန်တင် ဘောလုံးပျက်။ အဲဒါအလုံးတိုင်းလိုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက် ကွင်းလယ်ခံစစ်နဲ့ နောက်တန်းကြားထဲမှာ ဇာတ်ကလို့ရတဲ့ ကွက်လပ်ကြီးက မိနစ်(၉၀)လုံး မြင်နေရပြီး ဘာကြောင့်အဲလိုဖြစ်လဲ ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကိုမရပါဘူး။ နည်းစနစ်က အားနည်းလို့ကစားသမားတွေ အားထုတ်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြည့်တော့ . . .
အရင်ကထက်တောင်ပိုဆိုးလာတဲ့သဘောပါပဲ။ ခံစစ်သမားတွေက နွားသိုးကြိုးပြတ် အတင်းဝင်မှ ဘောလုံးဖျက်လို့ရမယ် ဆိုတဲ့ ၁၉ရာစုအတွေးတွေနဲ့ ခြေကားယားလက်ကားဝင်နေတာကို ဟိုဖက်က ကပ်ထွက်နေတာကြည့်ရတာ စိတ်ဆိုးပြီးလိုက်နေ တဲ့ကလေးကို လူကြီးက ကြည်စယ်နေသလိုပဲ။ ရှက်စရာတောင်ကောင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး ခံစစ်က အသည်းအသန်ဖျက် ထုတ်လိုက်လို့ထွက်လာတာကို Counter ပြန်စမယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ယောက်က နောက်တစ်ယောက်ကိုပေးပြီးနေရာပြန်မယူ ရသေးဘူး ကန်ထုတ်လိုက်ပြီ ဒါမှမဟုတ် ဟိုဖက်ကလူတွေဆီဆွဲဝင်ပြီးလိမ်ဖို့ကြိုးစားရင်း ပျက်ပြီ။ ဟိုဖက်အသင်းကပိုသာတာ မှန်ပေမယ့်အားနည်းချက်တွေလည်းရှိနေတာ အတိုင်းသားမြင်နေရပါတယ်။ Back Pass အမှာချည်း (၃)ခါလောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒါကို ဂိုးရအောင်သွင်းတာ အသာထား ဂိုးကန်ခွင့်တောင်ရအောင် အခွင့်အရေးမယူနိုင်တော့ ဘယ်လိုအခြေအနေမှ ဂိုးရမလဲ ဆိုတာမေးရမလို။
နောက်ပွဲထဲမှာ ကစားသမားတွေရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ လူစားလဲမှု၊ ပြိုင်ဖက်အပေါ်လေးစားမှု . . . ရေးရင်အများ ကြီးရှိနေပါ သေးတယ်။ ဘောလုံးပွဲသိပ်မကြည့်တတ်တဲ့သူတွေတောင် အတိုင်းသားမြင်နေရတဲ့ အားနည်းချက်ပေါင်း ဗရပွနဲ့ မြန်မာအသင်းပါ။ ကျွန်တော့်တစ်သက်မှာ ဒီအသင်းလောက် အားနည်းတဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်း တစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့စံချိန် တင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရပါတယ်။ ကောင်းပြီလေ။ ဘောလုံးဆိုတာ မိနစ် (၉၀)မှာဘဲမပြီးဘူးမဟုတ်လား။ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲ။ ဆရာကြီးတွေပြောနေကြအတိုင်း “အရှုံးထဲကသင်ခန်းစာယူ . . . blah . . .blah. . .” ဆိုတာတွေ ကျေးဇူးပြုပြီး တော်လိုက်ပါတော့ . . .
ဒီအနေအထားမှာ မြန်မာ့ဘောလုံးကို ရင်ထဲအသည်းထဲက ချစ်မြတ်နိုးစိတ်နဲ့ တစိုက်မတ်မတ်အားပေးလာခဲ့တဲ့ ပရိသတ် အနေနဲ့ မျှော်လင့်စရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ “ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆတဲ့လူတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်တာ ၀န်ကိုယ်ယူပြီး နှုတ်ထွက်ပါတယ်” ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ် . . .။
Photo credit myanmar soccer cafe
ကဵန်ြတော် ပေးထားတဲ့ခေၝင်းစဉ်ဖတ်္ဘပီး ဆဲဆိုရန်အလိုႛငြာူပင်ဆင်နေုကကုန်သော တာဇံမဵြိးံယ်ြဝင်အပေၝင်းတိုႛ စိတ်ရညြ် သည်းခံ္ဘပီး စာကို အဆုံးအထိဖတ်ပေးဖိုႛအရင်ဆုံးတောင်းဆိုပၝတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗဵ။ အူဖစ်က မိံစ်ြကနဲႛမတူဘူး စာကို အဆုံး အထိမဖတ် စာရေးသူေူပာခဵင်တာဘာလဲသေခဵာမသိဘဲ ခေၝင်းစဉ်ဖတ်္ဘပီး ဆဲနေုကတာ ခဏခဏခံနေရတာဆိုတော့ အရင်ဆုံး ဒၝကိုရငြ်းမြူဖစ်မယ်။ (ကလေးဘဝကဖတ်ခဲ့တဲ့ ကာတနြ်းတေထြဲမြာ “ရေဘြခံနေရတာခဏပၝ နောက်တစ်ခန်ူးပန်ိုိံင်မြာပၝ” ဆ္ဘိုပီးေုကညာတဲ့သဘောပၝပဲလေ)။ ဘာလိုႛလဲဆိုတော့ ရေးမယ့်အေုကာင်းအရာက ဒီနေႛအန်ြလိုင်းမြာ အူမင်ရဆုံးစံခဵိန်တ င်ူမန်မာ့လက်ရြေးစင်ဘောလုံးအသင်းအေုကာင်းရေးမြာူဖစ်လိုႛပၝပဲ။
အရင်တုန်းကူမန်မာအသင်းတေကြို စိတ်ပဵက်တယ် လိုႛမုကာခဏေူပာဖူးခဲ့ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် မနေႛက ကာဂဵစ်နဲႛ ကစားတဲ့ပြဲကိုကည့်နေတဲ့အခဵိန်မြာတော့ “ငၝအရင်က စိတ်ပဵက်စရာကောင်းတယ်လိုႛ ထင်ခဲ့တာ အခုနဲႛစာရင်ဘာဟုတ်သေးလိုႛ လဲ”ဆ္ဘိုပီးတြေးရတဲ့အထိ စိတ်ပဵက်စရာကောင်းခဲ့တာပၝ။ ဘောလုံးပြဲတစ်ပြဲကို ရြံးတိုင်း အူပစ်တင်နေ ဆဲဆိုနေတဲ့လူတေထြဲမြာ ကဵန်ြတော်မပၝသလို ဘောလုံးအသင်းရဲႚ ရလဒ်အပေၞမူတည်္ဘပီး စမြ်းဆောင်ရည်နဲႛ အားထုတ်မကြို ဘယ်တော့မအြကဲမူဖတ်သူဖစ်ပၝတယ်။ူမန်မာဘောလုံးအသင်းတြေ ရြံးခဲ့တာ အဋ္ဌကိမ်ပေၝင်းမဵားစြာရြိပၝတယ်။ ဘာမအြကဵြိးအေုကာင်းမရြိဘဲ ဟိုလူညံ့တယ် ဒီလူညံ့တယ်ဆိုတာမဵြိးအူပစ်တင်တဲ့ပုံစံမူဖစ်အောင် ဋ္ဌကြိးစား္ဘပီး အတတ်ိုိံင်ဆုံး အူပသြဘောဆောင်ိုိံင်တဲ့အထိူဖည့်တြေးပေးခဲ့ တာတေခြဵည်းပၝပဲ။ ဘာလိုႛလဲဆိုတော့္ဘပီးခဲ့တဲ့ အူဖစ်တေကြိုပန်အူပစ်တင်္ဘပီး ဝေဖန်အူပစ်တင်တယ်ဆိုတာူပန်ူပင်လိုႛ မရတဲ့အနေအထား တစ်ခုမြာ တရားခံရြာ အူပစ်ပုံခဵသလိုဖစ်န္ဘေပီး အကဵြိးထက် အူပစ် ပိုမဵားတဲ့သဘောေုကာင့်ူဖစ်ပၝတယ်။
ဒၝပေမယ့်ဒီတစ်ခၝတော့ မဝေဖန်လိုႛမရတော့ပၝဘူး။ူဖည့်တြေး္ဘပီး နားလည်ပေးလိုႛမူဖစ်ိုိံင်တော့ပၝဘူး။ ဘာလိုႛလဲဆိုတော့ ဒီပုံစံအတိုင်းစီးေူမာန္ဘေပီး တူဖည်ူးဖည်းနိမ့်သထက်နိမ့်ကဵလာတဲ့အနေအထားက အဆိုးဆုံးအနေအထာူးဖစ်လ္ဘာပီမိုႛလိုႛပၝ။ အခု လိုေူခစစ်ပြဲမြာ ဂိုးပတ်ရြံးတာအထူးအဆန်းလုပ်္ဘပီး ဘာလိုႛခုမြေူပာနေရသလဲ။ အခုမရြံးဖူးတာမမြဟုတ်တာ။ ဒီလိုပန်မေးလာ ရင်လည်းေူဖစရာအသင့်ရြိပၝတယ်။ အားနည်းတဲ့အခဵက်တြေ မြားယငြ်းတဲ့အခဵက်တြေ အမဵားဋ္ဌကီးရြိနေတာကို ထောက်ူပခဲ့ အဋ္ဌကူံပခြဲ့ဆြေးြေိံးခဲ့တာတေအြမဵားဋ္ဌကီးရြိခဲ့ပေမယ့် တစ်ခုမြူပင်ဆင်တာမဵြိးမရြိဘဲ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်စိုင်း္ဘပီး နစ်သထက်နစ် အောင်လုပ်နေတာေုကာင့်ပၝ။ အခုလိုရေးလိုႛလည်ူးပင်ဆင်မယ် ဋ္ဌကြိးစားမယ် ဆိုတဲ့အထိ တနြ်းပိုႛိုိံင်မယ်လိုႛမယူဆပၝဘူး။ ဒၝပေမယ့်ဒီအတကြ် တနြ်းအားလေးတစ်ခုတောူ့ဖစ်စေမယ်လိုႛယုံလိုႛပၝ။ကဲ. . . ကာဂဵစ်င်္စတန်ကို (၇)ဂိုးဆိုတဲ့ကိင်္စ ပဲေူပာလိုက်ရအောင်။
ဒီူဖစ်စဉ်က ကဵန်ြတော်တိုႛလက်ရြိရောက်နေတဲ့ ဘောလုံးအဆင့်အတန်းကို ကက်ြကက်ြကငြ်းကငြ်းမီးမောင်းထိုးပနေတာ ပၝပဲ။ ကာဂဵစ်င်္စတန်ဆိုတာ ကိုယ်တေထြက်ေူခစမြ်း၊ ဋ္ဌကံ့ခိုင်မြ၊ ခန်ြအား၊ အရပ်အမောင်း သာလန်ြတဲ့အသင်းဆိုတာလက်ခံပၝ တယ်။ ဒၝပေမယ့် ဘောလုံးကငြ်းထဲမြာ မူဋ္ဌကိကြေဵာင်းသားတေနြဲႛ တက္ကသိုလ်ကေဵာင်းသားတြေ ဘောလုံး ကန်သလိုဖစ်ရလောက် အောင်တော့ကြာဟမမြရြိပၝဘူး။ ဘာေုကာင့်အခုလိုကြာဟရတာလဲေူခစမြ်း၊ ဋ္ဌကံ့ခိုင်မြ၊ အာရုံစူးစိုက်မြ၊ နည်းစနစ်၊ နည်းဗဵဟြာ၊ ဋ္ဌကိတြင်ူပင်ဆင်မြ၊ ရည်မနြ်းခဵက်ထားမြ၊ စီမံခန်ႛခြဲမနြဲႛ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း ဘယ်တစ်ခုမြာမြ မန်ြကန်တဲ့လုပ်ဆောင်မမြတြေႛခဲ့ရလိုႛပၝ။
ပထမဆုံးစေူပာရမြာက နည်ူးပနဲႛ စီမံအုပ်ခဵပ်ြမအြဖြဲႚ။နောက်္ဘပီး အရေးဋ္ဌကီးတာက “နည်းစနစ်ကော်မတီ” အဖြဲႛ။ ဒီပြဲမြာ ကစားဖိုႛ လူရြေးခဵယ်တဲ့အပိုင်းနဲႛ ပြဲထက်ြလူစာရင်းကို ဘယ်သူကတာဝန်ယူခဲ့ပၝသလဲ။ နည်ူးပလား ဒၝမမြဟုတ် နည်းစနစ်ကော်မတီလား။ ဘယ်လိုပုံစံမဵြိးနဲႛ ဘယ်လိုစံမဵြိးနဲႛ ရြေးခဲ့ပၝသလဲ။ သိဖိုႛလိုအပ်ပၝတယ်။ ဘာလိုႛလဲဆိုတော့ လူရြေးခဵယ်မြ မြာကတည်းက ကငြ်းလယ်ပိုင်းအားနည်းခဵက်ကိုထောက်ူပုကတယ်။ MNL မြာေူခစမြ်ူးပနေတဲ့ ကစားသမားတခဵြိႛထား ခဲ့္ဘပီး ခေၝင်းမာမာနဲႛ ရြေႚဆက်တယ်။ ပြဲထက်ြလူစာရင်းမြာတော့ ကငြ်းလယ်ကို ကလပ်မြာဗဟိုခံစစ်ကစားနေရတဲ့သူတေကြ ကစား၊ တောင်ပံခံစစ်မြာလည်း ကစားနေုကမဟုတ်တဲ့သူတေကြစားခိုင်း ရငြ်းရငြ်းေူပာရင် ရပ်ကက်ြပြဲတေကြစားလိုႛ လူ(၁၁)ပဲရြိ တယ်။ အဲဒီလူ (၁၁)ယောက်ကို အဆင်ေူပအောင်နေရာခဵလိုက် ဆိုလိုႛလုပ်ထားရတဲ့ပုံစူံဖစ်နေတယ်။ အရန်ထဲမြာရော၊ မရြေးဘဲ ကဵန်ခဲ့တဲ့ထဲမြာရော ရြိနေတဲ့ကငြ်းလယ်တြေ တောင်ပံခံစစ်တေကြ ပဲထြက်ြတေလြောက် စမြ်းဆောင်ရည်မကောင်းသလိုလို။ ဒၝဆိုလည်း ကိုယ့်နေရာမြာကိုယ်ပိုင်ိုိံင်အောင်မကစာိးုိံင်ဘဲ တူခားကစားသမားတေအြစားဝင်ူဖည့်ရမယ့်အတူ ရန်အောင်ကေဵာ်၊ ဒေးဗစ်ထန်၊ ကေဵာ်ဇင်လငြ် တိုႛလိုကစားသမားတြေ နဂိုကတည်းက မရြေးဘဲ ခဵန်ခဲ့ရင် တူခားကစားသမားတြေ ရြေးဖိုႛ နေရာထက်ြမလိာုိံင်ဘူးလား။ အခုတော့ ကစားသမားတေကြ သူတိုႛကစားနေကဵနေရာမြာ မဟုတ်ဘဲ ကစားရတော့ သူမဵားကိုဖဵက်ဖိုႛခဏထား ကိုယ်တောင်ဘယ်နေရာနေရမနြ်းမသိဘဲ ယောင်လည်လည်ူဖစ်နေတာ တြေ အမဵားဋ္ဌကီးပဲ။
နောက် နည်းစနစ်။ ဒၝကိုလည်း ဘယ်သူစီမံခန်ႛခြ္ဘဲပီး တာဝန်ယူသလဲသိခဵင်ပၝတယ်။ ဒၝနည်ူးပတစ်ယောက်တည်းရဲႚ ဆုံူးဖတ်ခဵက်လား။ ဒၝမမြဟုတ် တတ်ယောင်ကားစက်ြဖက်မတြေရြိနေလား ဆိုတာသိဖိုႛလိုပၝတယ်။ ဘာလိုႛလည်းဆိုတော့ ဆိုးရြား လနြ်းတဲ့နည်းစနစ်အခင်းအကဵင်းေုကာင့်ပၝ။ အမဵားဋ္ဌကီးမေူပာလိုပၝဘူး။ တစ်ခုပဲေူပာပၝမယ်။ြGoal kick က side back တေကြို ပေးတဲ့အခဵိန်မြာ တစ်ဖက်က Pressing လုပ်ကစားပၝတယ်။ အဲဒီအခဵိန်မြာ ကငြ်းလယ်က Side Back ကိုဆင်းမကူ တော့ အတငြ်းထဲူပန်ပေး ဟိုက Pressing လာတော့ ကန်တင် ဘောလုံးပဵက်။ အဲဒၝအလုံးတိုင်းလိုလိုဖစ်နေပၝတယ်။ နောက် ကငြ်းလယ်ခံစစ်နဲႛ နောက်တန်ုးကားထဲမြာ ဇာတ်ကလိုႛရတဲ့ ကက်ြလပ်ဋ္ဌကီးက မိနစ်(၉၀)လုံူးမင်နေရ္ဘပီး ဘာေုကာင့်အဲလိုဖစ်လဲ ဆိုတာ စဉ်းစားလိုႛကိုမရပၝဘူး။ နည်းစနစ်က အားနည်းလိုႛကစားသမားတြေ အားထုတ်မနြဲႛစိတ်ဓာတ်ုကည့်တော့ . . .
အရင်ကထက်တောင်ပိုဆိုးလာတဲ့သဘောပၝပဲ။ ခံစစ်သမားတေကြိာံးသိုးဋ္ဌကြိူးပတ် အတင်းဝင်မြ ဘောလုံးဖဵက်လိုႛရမယ် ဆိုတဲ့ ၁၉ရာစုအတြေးတေနြဲႛေူခကားယားလက်ကားဝင်နေတာကို ဟိုဖက်က ကပ်ထက်ြနေတာုကည့်ရတာ စိတ်ဆိုး္ဘပီးလိုက်နေ တဲ့ကလေးကို လူဋ္ဌကီးကုကည်စယ်နေသလိုပဲ။ ရက်ြစရာတောင်ကောင်းပၝတယ်။ နောက်္ဘပီး ခံစစ်က အသည်းအသန်ဖဵက် ထုတ်လိုက်လိုႛထက်ြလာတာကို Counterူပန်စမယ်။ အဲဒီမြာ တစ်ယောက်က နောက်တစ်ယောက်ကိုပေး္ဘပီးနေရာူပန်မယူ ရသေးဘူး ကန်ထုတ်လိုက်္ဘပီ ဒၝမမြဟုတ် ဟိုဖက်ကလူတေဆြီဆြဲဝင်္ဘပီးလိမ်ဖိုႛဋ္ဌကြိးစားရင်း ပဵက်္ဘပီ။ ဟိုဖက်အသင်းကပိုသာတာ မန်ြပေမယ့်အားနည်းခဵက်တေလြည်းရြိနေတာ အတိုင်းသာူးမင်နေရပၝတယ်။ Back Pass အမြာခဵည်း (၃)ခၝလောက်ူဖစ်ခဲ့တာပၝ။ အဲဒၝကို ဂိုးရအောင်သငြ်းတာ အသာထား ဂိုးကန်ခငြ့်တောင်ရအောင် အခငြ့်အရေးမယိူုိံင်တော့ ဘယ်လိုအေူခအနေမြ ဂိုးရမလဲ ဆိုတာမေးရမလို။
နောက်ပြဲထဲမြာ ကစားသမားတေရြဲႚ အာရုံစူးစိုက်မြ၊ လူစားလဲမြ၊္ဘပိင်ြဖက်အပေၞလေးစားမြ . . . ရေးရင်အမဵား ဋ္ဌကီးရြိနေပၝ သေးတယ်။ ဘောလုံးပြဲသိပ်မုကည့်တတ်တဲ့သူတေတြောင် အတိုင်းသာူးမင်နေရတဲ့ အားနည်းခဵက်ပေၝင်း ဗရပနြဲႛူမန်မာအသင်းပၝ။ ကဵန်ြတော့်တစ်သက်မြာ ဒီအသင်းလောက် အားနည်းတဲူ့မန်မာ့လက်ရြေးစင်အသင်း တစ်ခၝမမြူမင်ဖူးတဲ့စံခဵိန် တင်ခဲ့တယ်လိုႛေူပာရပၝတယ်။ ကောင်း္ဘပီလေ။ ဘောလုံးဆိုတာ မိနစ် (၉၀)မြာဘဲမ္ဘပီးဘူးမဟုတ်လား။ ဘာဆက်လုပ်ုကမလဲ။ ဘယ်လိုရြေႚဆက်သြားမလဲ။ ဆရာဋ္ဌကီးတြေေူပာနေုကအတိုင်း “အရြံးထဲကသင်ခန်းစာယူ . . . blah . . .blah. . .” ဆိုတာတြေ ကေဵးဇူးပ္ဘြပီး တော်လိုက်ပၝတော့ . . .
ဒီအနေအထားမြာူမန်မာ့ဘောလုံးကို ရင်ထဲအသည်းထဲက ခဵစ်ူမတ်ိုိံးစိတ်နဲႛ တစိုက်မတ်မတ်အားပေးလာခဲ့တဲ့ ပရိသတ် အနေနဲႛ မ္တွော်လင့်စရာတစ်ခုပဲရြိပၝတယ်။ “ဒီပြဲနဲႛပတ်သက်္ဘပီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တာဝန်ရြိတယ်လိုႛ ယူဆတဲ့လူတေအြနေနဲႛ ကိုယ့်တာ ဝန်ကိုယ်ယ္ဘူပီိးံတ်ြထက်ြပၝတယ်” ဆိုတဲ့သတင်းပဲူဖစ်ပၝတော့တယ် . . .။
Home Football Team Myanmar မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုရှိနေတယ်